Maraoka: Nosamborina ilay bilaogera ary nomelohina avy hatrany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Marsa 2019 3:40 GMT
Vaovao farany: noafahan'ny fitsarana ambony madiodio ary efa afaka ilay bilaogera Maraokana Mohammed Erraji:
Afaka i Mohamed Erraji
Alakamisy 18 Septambra 2008. Namadika ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ambaratonga voalohany ny fitsarana ambony tao Agadir ary nanapa-kevitra ny hamafa ny fiampangana rehetra nanenjehana ilay bilaogera Mohamed Erraji.
Amin'ny anaran'ny fianakaviany sy ireo namany dia misaotra ireo rehetra izay nanohana azy ireo nandritra ireo fotoan-tsarotra izy ireo. Tsy vita izany vokatra tsara izany raha tsy nisy ny fanohananareo . Misaotra betsaka, misaotra anareo tamin'ny zavatra rehetra!
Notaterin'ny tranonkalam-baovao Hespress ny maraina tamin'io andro io fa nosamborina tao an-tranony tao Agadir ilay bilaogera Mohammed Raji . Voalaza fa lahatsoratra iray izay navoakan'i Raji tao amin'ny Hespress no loharanon'ny fifandonana, kanefa tsy mbola voamarina ivelan'ny tontolon'ny bilaogy izany sy ny fisamborana an'i Raji .
Mandrara ny fanakianana ny fitondram-panjakàna ny lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety ao Maraoka izay voatsikera matetika ; Tao amin'ny lahatsoratr'i Raji, izay efa nadikan'i Amira Al Hussaini ato dia nilaza izy fa mandrisika azy ireo hijanona ho tsy afa-manoatra, fa tsy hiasa mafy ny fiantrana ataon'ny Mpanjaka amin'ny vahoakany. Mivaky toy izao ny fehintsoratra famintinana hoe:
Raha manatri-maso ny fomba hizaran'ny rainy fanomezam-boninahitra, valisoa sy fanomezana ho an'ny olona rehefa avy mandre fandokana sy fiderana ilay Printsy tanora handimby, izay ho lasa Mpitondra indray andro any dia tsy hisalasalana fa hanao zavatra mifanaraka amin'ny lojika mitovy amin'izany izy, rehefa mitondra. Izany no tokony hanemorantsika ny nofinofintsika amin'ny fitoviana sy ny fitoviana amin'ny varavarana misokatra ho antsika manao zavatra ao Maraoka mandra-pahatonga ny fitondran'i Mohammad Fahafito, izay hitondra aorian'i Hassan Fahatelo, izay Printsy mpandova amin'izao ankehitriny izao.
Nanazava ny tokotany lazain'ny lahatsoratra ny bilaogy A Moroccan About the World Around Him:
Miresaka momba ilay antsoin'ny Maraokana mahazatra hoe “GRIMA” avy amin'ny teny Frantsay hoe “agrément” izay midika hoe “fanomezan-dàlana ara-panjakana.” ny lahatsoratr'i Mohamed, nosoratana tamin'ny teny Arabo ary mitondra ny lohateny hoe ” Manome Fahafaham-po Ny Tsy Afa-manoatra Ny Mpanjaka.” Efa fomba nentim-paharazana ho an'ny mpanjaka hatry ny ela tany Maraoka ny “fanomezan-dàlana ara-panjakana”. Mazava ho azy fa mamela izay nandray izany tsy handalo ny dingana ara-pitantanana rehetra ny fanomezan-dàlana toy izany; Tsy miraharaha ny lalàna sy fitsipika rehetra natao handrindrana ny dingana toy izany izy ireo. Saingy efa tena lalimpaka ao an-tsain'ny Maraokana ilay fomba fanao ka matetika ireo Maraokana eto avy amin'ny lafim-piainana rehetra no mivavaka : “Enga anie i Allah hanome anay ” GRIMA “avy any Sidna.”
Nitatitra ny tantara ihany koa ireo bilaogera hafa, anisan'izany ny A Moroccan in Washington, D.C , zalamite sy Larbi .
Nitatitra ny Hespress fa efa nanaovana fanadihadiana haingana sy niakatra fitsaràna i Raji ary voasazy higadra 2 taona an-tranomaizina ary nandoa lamandy mitentina MAD 5.000 (625 dolara Amerikana). Nanazava i Larbi :
Tao anatin'ny fitsarana nohafainganina araka ny fanaon'ireo firenena mpanao didy jadona indrindra eto amin'izao tontolo izao dia nanameloka ilay bilaogera Maraokana Mohammed Erraji higadra 2 taona an-tranomaizina ary handoa lamandy 5.000 dhs noho ny “tsy fahombiazany nanaja ny Mpanjaka ny tribonaly Agadir.”
Nisy ny fanangonan-tsonia sy ny fananganana vondrona Facebook ho an'ny fanafahana an'i Mohammed Raji.
14 ora izayAmerika Latina